Indlela ukulungiselela amanzi okugqumisa
Amanzi okugqumisa - akukho isobho ezingadumile kakhulu ukwedlula isobho noma isobho. Kodwa kanjani ukuba apheke emangalisayo amanzi okugqumisa kwesokudla, ngakho waphenduka esihlwabusayo futhi unempilo? Abaningi Omuny abanolwazi uzimisele ukukubonisa senza lokhu izitsha emangalisayo isiRashiya, futhi thina baqoqa izincomo zabo abafundi bethu.
Okokuqala, ake sixoxe umhluzi. Indlela ukulungiselela amanzi okugqumisa, ne inyama noma nemifino umhluzi, wonke umuntu uyazinqumela. Futhi eqinisweni, futhi kwelinye icala ukwenza konke ngendlela efanele, uthola isobho okumnandi. Uma umhluzi kuyinto inyama, khona-ke kusho ukuthi kumelwe sikhethe abanzi izisekelo zalo. Ungathatha ingulube, yenkomo, iwundlu, izimbambo ngibhema, noma inyoni. Ngokuvamile esetshenziselwa rassolnik offal - izinso, inyama yenkonyana inhliziyo. Basuke pre-ofakwe amahora ambalwa noma ngisho ukushiya ebusuku. Izinso kudingeka pre-bahlanza fat namafilimu. Abanye besifazane abenza inhlanganisela izinso kanye inkukhu umhluzi. Kukhona futhi izinhlanzi abalandeli rassolnik.
Uma ukupheka bendabuko isobho - ingulube noma yenkomo - kungcono ukuthatha brisket, ehlombe, iqolo noma emaphethelweni. Inyama kumele chilled ne amathambo. abapheki abanolwazi batusa wageza inyama deda ngosawoti kanye pepper bese ushiye ezinabantu esitsheni uphawu a pomarinovatsya kancane endaweni ethile ngehora. Olinganise Kunconywa ukuba sithola umhluzi ukupheka - 2 amalitha amanzi kilogram of inyama ngalinye. Inyama sigcwale amanzi abandayo imizuzu eyodwa nengxenye emahoreni amabili. Kuyadingeka ukuba ususe Foam imiswe phakathi ukupheka. I Foam kuhle ukuhlala ngokuphelele akufanele. Kuthuthukisa ukunambitheka umhluzi uyifaka imifino okuthosiwe ngaphandle uwoyela. Kunconywe ukuthatha i anyanisi, isanqante, uma ikhona, isilimo esidliwayo esinamagatsha anamanzi noma parsley, bese Fry kwabo ngaphandle amafutha epanini ukuthosa imizuzu 15-20. Lapho umhluzi kuziwa ngamathumba, engeza imifino kuwo, allspice, bay leaf. Ngaphambi wengeze lonke amanzi okugqumisa yakhe izithako ethosiwe imifino yonke kulahliwe.
Isobho lenkukhu kuyalungiswa ngokushesha kakhulu: isikhathi kuzoqhubeka imizuzu 30-40 kuphela.
Zikhona izindlela ukuthi uchaze ukuthi ukuba silungiselele amanzi okugqumisa ku mushroom umhluzi, amakhowe kungaba fresh, yomiswa. Kulokhu, amakhowe kuphekwa kuze okuphekwe futhi asuswe umhluzi bese upheka it on zonke ezinye izithako ngendlela evamile. Amakhowe sibe yimichilo bese wengeza kuya isobho ekupheleni ukupheka.
Recipe rassolnik okumnandi kuhilela ukusetshenziswa ibhali nje esikhundleni irayisi. Cereal kungcono cwilisa, ngakho unina walungisa ngokushesha. Ncoma ibhali abilisiwe ngokuhlukile umhluzi kuze ephelele ukuhwamuka kwamanzi. Ngaphezu kwalokho, isilinganiso kokusanhlamvu / amanzi kufanele kube 1: 2.
Indlela ukulungiselela amanzi okugqumisa ngaphandle zazharki, ngoba ngaphandle kwalo Awukwazi ukwenza noma yikuphi isobho? Okokuqala, bakuthinte isanqante, encane noma enkulu, iyindaba ukunambitheka. Yiphonse kuso. Kuyilapho ethosiwe, ehlanzekile usike onion. Ngokuvamile sebenzisa iphuzu elilodwa noma amabili izaqathe medium and omunye follicle yesibili. Ngaleso sikhathi, uma nquma anyanisi, izaqathe nje ukuba balungele ngesigamu. Engeza anyanisi bese sauté nemifino kuphela kwaze kwaba onion lutho. Ekupheleni ukupheka zazharki ungakwazi ukwengeza utamatisi juice noma unamathisele. Sauce, isoso kungcono hhayi ukusebenzisa ngoba kungonakalisa ukunambitheka ilungu yabo seasonings.
Amazambane ngoba rassolnik uthathe cubes noma emapheshana. Yengeze isobho udinga ngokushesha kunezinsuku ukhukhamba. Ungesabi okugaya leso amazambane isobho. Uma lokhu kwenzeka, lokhu isobho ngeke kukulimaze.
Indlela ukupheka amanzi okugqumisa okumnandi? Sebenzisa usawoti kanye ukhukhamba zicwiliswe akuzona. Pickles ukunikeza isobho wephunga ocebile futhi ukunambitheka omuncu oyifunayo. Uma ikhasi ikhukhamba awugqinsi, kufanele axoshwe, oqoshiwe, e esincane umhluzi imizuzu engu-15. Uma une ukhukhamba ne isikhumba elincanyana, ngemva slicing abaphonse ngqo isobho. Ukuze ukukhanya, futhi ungakwazi ukwengeza amanzi okugqumisa ikhukhamba, okuyinto ngaphambi uthele imbiza, udinga ubilise. Uma brine kuyinto ebukhali kakhulu, kumele buhlanjululwe ngamanzi.
Ngezinye kakhulu ekupheleni ukupheka lapho isobho isicishe ilungele, engeza isikhuphasha egg, rastorty ukhilimu omuncu, kuyilapho ibangele amanzi okugqumisa. Khonza isobho nge ukhilimu omuncu ngempela.
Kukhona umehluko wemisindo nemiqondo yamagama amaningi izimfihlo, futhi sethemba ukuthi zonke owesifazane angathola kusukela sihloko okuthile wena luthela abapheki ngeke baqonde indlela ukulungiselela amanzi okugqumisa.
Cream isobho: zokupheka best cuisine emhlabeni
Sorrel isobho: iresiphi iresiphi
Ukupheka esiphundu ipea isobho ku multivarka mafutha
Inthanethi "Tele2": ukubuyekezwa, izilungiselelo uxhumano, amaphakheji
Ezixutshiwe ukutheleleka: ukuxilongwa kanye nokwelashwa
Cafe "Cambridge" Samara: Uhlolojikelele, amamenyu kanye nokubuyekeza amakhasimende
Komsomolets - ke ... Okwakushiwo "Komsomolets"
13 Izizathu ocansini kaningi
Varicose emithanjeni. Ake ukukhohlwa ngakho.
Indlela hlola SLR ikhamera lapho uthenga Amathiphu umthwebuli nabo
Ukuhlukaniswa kwe-Feudal - isigaba esichazayo sokuthuthukiswa kweYurophu
Amanzi epaki "Serena" e Helsinki: incazelo, ukuzijabulisa, amanani. Isilinganiselwa waterparks Finland